चितवन । चितवनमा तोरी उत्पादन बढेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा तोरीको उत्पादन बढेको हो । गतवर्ष जिल्लामा १२ हजार २६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा १२ हजार ३०६ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष सोही क्षेत्रफलमा १४ हजार ७१४ दशमलव ४ मेट्रिकटन उत्पादन भएको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरुचि त्रिपाठीले जानकारी दिइन् ।
त्रिपाठीका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष तोरीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष उत्पादकत्व एक प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्ष तोरीका लागि मौसम अनुकूल भएको र रोग, कीराको प्रकोप कम भएकाले उत्पादन बढेको उनले बाइन् ।
जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ र अन्य ६ ओटा नगरपालिकामा तोरीखेती गरिँदै आएको छ । जिल्लाका किसानले तोरी खेतीमा बढी मात्रामा एमोनियम सल्फेट प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसको प्रयोगले तेलको उत्पादन बढी हुने गरेको कार्यालयले बताएको छ । रासायनिक मलको सट्टामा किसानले यसको प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि यसले माटोको उर्वराशक्तिमा कम हुने उनले बताइन् ।
विशेषगरी खैरहनी र माडी नगरपालिकामा धेरै तोरीखेती गरिँदै आएको छ । सिँचाइको सुविधा भएका ठाउँमा तोरी राम्रो उत्पादन भएको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले बताइन् । नेपालमा लगाइने बालीमध्ये छैटौं बालीको रूपमा तोरी बालीलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादन र क्षेत्रफलको हिसाबले यो छैटौं बाली हो । धान, मकै, गहुँ, कोदो, कोसेबालीपछि तोरीलाई लिने गरिएको छ ।
नेपालमा दुई लाख ६० हजार ३०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा तेलहन बाली गरिँदै आएको छ । यहाँ वार्षिक २ लाख ८० हजार ५३० मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको ज्ञान केन्द्रले बताएको छ । तेलहन बाली गरिने क्षेत्रमध्ये ९० प्रतिशत क्षेत्रमा तोरी खेती गरिने गरेको छ । दश प्रतिशत क्षेत्रफलमा सूर्यमुखी, सरस्यूँ, तिल, आलसजस्ता तेलहन बाली गरिने गरिन्छ । कैलाली, बर्दिया र दाङमा विशेषगरी तोरी खेती बढी गरिन्छ । पहिलेपहिले तोरीका लागि प्रख्यात जिल्ला मानिएको चितवन पछिल्ला वर्षमा भने उत्पादन घट्दै गएको थियो ।
आज चैते दशैँ, देशभर नवदुर्गा भवानीको पूजा गरी मनाइँदै
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैते दशैँ पर्व आज नेपालीले घर घरमा नवदुर...
शनिबार किन शनिदेवको पुजा गरिन्छ ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । आज शनिबार मात्रै किन शनिदेवको पुजा गरिन्छ ? के शनिबार मात्रै शनिदेवको पुजा गरिन्छ त ? ...
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ वर्ष आरम्भसँगै मनाइने ‘बिसु’ पर्वको रौनक बढेको छ । यो पर्व मना...
काठमाडौंका पाँच स्थानमा ट्राफिक बत्ती राखिँदै
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि आगामी असार मसान्तसम्ममा थप पाँच...
बिस्केट जात्राको रथ तान्दा ढुङ्गा हानाहान, १९ जना घाइते
भक्तपुर । भक्तपुरमा हिजोदेखि शुरु भएको बिस्काः जात्रामा भैरवको रथ तान्ने क्रममा राति रथबाट झर्दा ...
उदयपुर । जिल्लाको बेलका नगरपालिका–८ कोठुमा प्रहरीले अवैध गाँजासहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । जि...